Ọhụrụ Samsung Gear Sport bụ ọrụ ugbu a ma ọ na-abịa juputara na akụkọ na-atọ ụtọ | Akụkọ akụrụngwa
Anyị amaworị na Samsung kwadebere ihe ngosi smartwatch ọhụrụ, baptizim dị ka Gear Sport, Site na nlekọta nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke hiere ụzọ tinye mgbasa ozi maka smartwatch ọhụrụ na-esote Galaxy Note 8 naanị awa ole na ole tupu ọrụ ngosi ya. Nke a mere na nkeji ole na ole gara aga na IFA 2017 nke a na-eme na Berlin.
Ihe ohuru a nke Samsung Gear Sport abughi ka o gbanwee igwe smartwatch, mana o di ka o na enye anyi nhọrọ ọhụrụ maka anyị niile ndị na-egwu egwu ma na-eche nche n'ebe ọ bụla, ọbụlagodi mita 50 n'okpuru mmiri.
Lee, anyị gosiri gị isi atụmatụ na nkọwa;
Akụkụ: 9mm obosara x 44.6mm elu x 11.6mm ọkpụrụkpụ
Arọ: gram 50 na-agụta mgbaaka
Ihe ngosi SuperAMOLED okirikiri 1.2-inch nwere mkpebi nke 360 ​​pi 360 pikselụ na 302 ppi
Gorilla Glass 3 nchedo nke na-enye anyị nguzogide nke 5 ATM
4GB n'ime nchekwa
Njikọ Bluetooth 4.1, Wi-Fi b / g / n, NFC na GPS / GLONASS / Beidou
Sensọ: Accelerometer, gyroscope, barometer, ọnụego obi na ihere
300mAh batrị na ikuku ikuku
Kwekọrọ n'Ozizi na niile Samsung Galaxy ngwaọrụ na gam akporo 4.3 ma ọ bụ karịa, ọ bụla gam akporo na gam akporo 4.4 ma ọ bụ karịa na iPhone 5, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus na iOS 9.0 ma ọ bụ karịa
Agba ojii na acha anụnụ anụnụ, nke nwere eriri 20 millimita
1 A smartwatch na-eche maka ndị egwuregwu niile
A smartwatch na-eche maka ndị egwuregwu niile
Akwụkwọ ọhụrụ nke Gear Sport ma e jiri ya tụnyere smartwatches ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ abụghị ihe doro anya, agbanyeghị na ọ bụ ihe kachasị amasị ọkachasị ndị egwuregwu niile, gụnyere ndị na-egwu mmiri. Ma ọ bụ na smartwatch ọhụrụ a sitere na Samsung na-emeziwanye na mmụba nke obi obi, mana na-etinye ya MIL-STD- Asambodo ntachi obi nke ndị agha MIL-STD nke ga-enyere anyị aka mikpuo ya 5 igwe ndọrọ ego, ihe dị ka 50 mita.
Ọ ga-enwe ngwa arụnyere n'ime Speedo On na S Ahụike nke ahụ ga-ezu oke iji chịkwaa ma gbasaa oge igwu mmiri gị n'ụzọ zuru ezu. Tinyere ihe ndị ọzọ, Egwuregwu Gear a ga-enwe ike ịlele ọnụọgụ nke ogologo anyị na-eme na ọdọ mmiri, oge nke ọ bụla ụkwụ, ọrịa strok na ọtụtụ data ndị ọzọ. Na mgbakwunye, Samsung echefubeghị ndị egwuregwu ndị ọzọ ọ ga - aga n'ihu na - enye ọtụtụ ozi na ezigbo oge.
N'oge na-adịbeghị anya ọ dị ka Samsung na-ejikwa ngosi nke ngwaọrụ ọhụrụ. na-enweghị ikwupụta ngwa ngwa ịbata n'ahịa, ihe ndị ọrụ na-anaghị amasịkarị ma ọlị. N'oge a Gear Sport enweghị ụbọchị ọbịbịa na ahịa ma ọ bụ ọnụahịa doro anya, ọ bụ ezie na ụbọchị ole na ole ụlọ ọrụ South Korea ga-amalite inye ozi.
Kedu ihe ị chere banyere Sport Gear ọhụrụ a nke anyị zutere naanị nkeji ole na ole gara aga na IFA 2017?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ọhụrụ Samsung Gear Sport bụrịrị onye ọrụ gọọmentị ma jiri ozi ọma na-adọrọ mmasị
N'oge ọ dị mma, mana na-enweghị njikọ 4G na usoro 1.2 (nke dị ugbu a dị ka ọkọlọtọ), anyị ga-amata ọnụahịa ahụ.
Nke gara aga dijo
Chọrọ ka ọ pụta, etu batrị si eme nke ọma na nguzogide ihu igwe ya. Ọ bụla echiche nke ya igba egbe na Spain?
Ọnụ ego m nwere ike iche….
Google Maps enyela anyị ohere ịchọta ebe ị na-adọba ụgbọala na Spain n'ụzọ dị mfe